Mesa 21.1.0 Inosvika neDriver Support Enhancements, Extensions uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kuburitswa kwakaziviswa kubva pane yekutanga vhezheni yebazi Mesa 21.1.0 iyo ine yekuyedza nyika uye kuti mushure mekudzikamisa kwekupedzisira kwekodhi, yakagadzikana vhezheni 21.1.1 ichaburitswa
Mesa 21.1.0 inoratidzira yakazara OpenGL 4.6 kuenderana ye 965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink uye madhiraivhopipe madhiraivha. Tsigiro yeOpenGL 4.5 inowanikwa ye AMD (r600) uye NVIDIA (nvc0) GPUs, uye OpenGL 4.3 ye virgl (chaiyo Virgil3D GPU yeQEMU / KVM). Vulkan 1.2 inoenderana nemakadhi eIntel uye AMD, uye Vulkan 1.0 yeVideoCore VI (Raspberry Pi 4).
1 Zvinyorwa zvitsva zveTafura 21.1.0
Zvinyorwa zvitsva zveTafura 21.1.0
Mune ino vhezheni nyowani yevatungamiriri veMesa isu tinokwanisa kuwana akasiyana kuvandudzwa kunoitwa mune vanodzora pamwe nekutsigirwa kwekuwedzeredzwa uye ndizvo izvo semuenzaniso mutungamiriri RADV inoshandisa VRS rutsigiro yekushandisa nechero yakadzika buffers, pamwe neVRS inovandudza kugadzirwa nemutengo wemhando.
Iyo D3D12 Gallium Mutungamiriri iine OpenGL rukoko pamusoro pe API DirectX 12 (D3D12) inopa OpenGL 3.3 rutsigiro paunenge uchishanda neWARP (rasterizer software) uye NVIDIA D3D12 driver uye ndeyekuti mutyairi anoshandiswa muWSL2 dara kumhanyisa Linux graphical application paWindows.
Zvakare kucherechedzwa kubatanidzwa kweiyo nyowani venus driver iyo inosanganisa iyo chaiyo GPU kuitisa (virtio-gpu) zvichibva paVulkan API.
Kune rimwe divi, zvinoonekwa kuti Zink mutyairi (kuiswa kweOverGL API paVulkan) inosanganisira rutsigiro rweOpenGL 4.6 uye OpenGL ES 3.1. Zink, iyo inobvumira Hardware-inomhanyisa OpenGL kana yako system iine mashoma madhiraivha ekutsigira chete iyo Vulkan API. Kuita kwaZink kunotaurwa kuve kuri padhuze neyekuzvarwa kwe OpenGL kuitiswa.
Mukuwedzera mune lavapipe controller (software rasterizer kuitisa yeVulkan API yakafanana kune llvmpipe, asi yeVulkan) inowedzera rutsigiro rweVulkan 1.1 uye inoshandisa kuwedzera kweVulkan VK_KHR_copy_commands2. Kuitwa kweiyo software mu lavapipe kunoenderana nekudzokorora mafoni kubva kuVulkan API kuenda kuGallium API.
Padivi rekuwedzera rutsigiro rutsva rwekuwedzera rwunoratidzwa VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout uye VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory yeVulkan RADV vatongi (AMD) uye ANV (Intel).
Yeimwe shanduko izvo zvinomira kubva pane iyi nyowani vhezheni yeMesa 21.1.0:
Wakawedzera rutsigiro rwe caching shader mune imwechete faira.
Iyo Virgl (Virgil3D chaiyo GPU yeQEMU / KVM) uye Lima (ARM Mali GPU) madhiraivha anotsigira disk shader caching.
Wakawedzera rutsigiro rwe AMD GPU Aldebaran (gfx90a).
Nyowani OpenGL yekuwedzera yakawedzerwa:
RADV driver (yemakadhi e AMD GFX9) akawedzera rutsigiro rwe DRM mafomati modifiers (VK_EXT_image_drm_format_modifier yekuwedzera inosanganisirwa)
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni yevatungamiriri veMesa 21.1.0, unogona kubvunza iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Mesa mapakeji inowanikwa mune ese Linux kugovera, saka kuiswa kwayo kunogona kuitwa nekudhanilodha nekunyora kodhi yekodhi (Zvese ruzivo nezvazvo pano) kana nenzira yakapusa, zvinoenderana nekuwanikwa mukati memakero epamutemo ekugovera kwako kana mapato echitatu.
Kune vese zvavari Vashandisi veFedora 32 vanogona kushandisa iyi repository, saka vanofanirwa kugonesa Corp ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mesa 21.1.0 inosvika pamwe nekufambisa rutsigiro, pamwe nekuwedzera